Jaceylkii Dhaxal-galay ee macallin iyo ardaygiisa dhex maray! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Jaceylkii Dhaxal-galay ee macallin iyo ardaygiisa dhex maray!
Posted by: Mahad Mohamed May 25, 2020
Himilo – Tani waa sheekada laba lammaane oo sannadkii 2018-ka aad uga soo shaac baxday dalka Induniisiya. Waxayna dhex martay laba qof oo da’da iyo darajadaba kala fog. Waa macalin iyo ardaygiisa. Waxay kala jireen 34 jir iyo 20 jir goortii ay go’aansadeen inay nolosha ku midoobaan sannadkii 2018-ka.
Laakiin qisadooda waxaa dib loogu celiyaa sannadkii 2011 markii gabar ardayad ah oo jirta 13 sanno ay ku dhacday inay xiriir jaceyl ku danbeyn doona marka danbe la qeybsato macalinkeeda oo 27 jir ahaa waqtigaas.
Bare Erwin Pangaila wuxuu jeclaaday Vinda Virginia oo, kasokow inay aad uga yareyd, haddana uu macalinkeeda ahaa. Iyaduna waxay ahayd mid uu si tartiib ah uu u saaqay aramida jaceylkiisa. Waxaana soo jiidan jiray muuqaalkiisa taagan iyo kalsoonida qofeed ee jirkiisa ka muuqata marwalba oo aradayda uu horyimaado.
Laakiin, Vinda ma ahayn gabadha kaliya ee uu xiriir dhex maro bare Erwin. Waxayse dadaal u gashay inay noqoto qofkii hanan lahayd qalbigiisa.
Marka xiisaduhu idlaadaan, waxay isku reebi jirtay gadaal si ay su’aalo iyo saha qalbigeedu ku sugan yahay ula wadaagto.
Ugu danbeyntii, xiriirkoodu wuxuu ku gabagaboobay jaceyl dhaxal-gala.
In xiriir nuucaan ah oo dhex maro macalin iyo ardaygiisa, waa mid la isku maan-dhaafsan yahay. Laakiin Erwin iyo Vinda ayaa qirsan inay sannado badan oo canbaareyn iyo isku ceebeyn ah ay kasoo gudbeen.
Waxay ku kalsoonaayeen qaddarta. Waxayna toddobo sanno oo xiriirkoodu jirsaday kaddib go’aansadeen inay is guursadaan.
Hadda waxay iyaga oo lammaane ah caan ka yihiin baraha bulshada. Waxayna inta badan soo geliyaan sawiro ay ku wehliso gabadhooda.
Previous: Muslimiin gargaar kala duwan la gaaraya kuwa ayaanka liita!
Next: Juventus oo weerarkeeda ku xoojinaysa Haaland